Izizathu eziyisithupha zokuhamba ngesikebhe nezingane | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Cruceros, Izindlela zokuphunyuka, Ukuhamba nezingane
Izikebhe ziyindlela yokuphumula njengeyinye. Kodwa-ke, kubantu abaningi uhambo olwandle lufana nokunethezeka kepha ezikhathini zamuva imodeli iguquke kakhulu. Ngemisebenzi ehlukahlukene yokuzilibazisa kanye nethuba lokuvakashela izindawo eziningana ngasikhathi sinye emkhunjini ogcwele izinsiza, abavakashi abaningi ngokwengeziwe bayayeka ukubona ukuhamba ngezinyawo njengezinto zikanokusho ezingafinyeleleki kubo futhi baze balinge nokwenza lolu hambo lomndeni.
Ngemuva kwakho konke, ezokuvakasha zasolwandle azikaze zinciphe ngesikhathi senhlekelele. Eminyakeni eyisishiyagalombili edlule ikhule ngo-49% ngokuya ngemininingwane ye-CLIA, okuyibonisa ukuthi ithole okunikezwayo okuncane nokukhangayo. Ngale ndlela, ukuhamba ngomkhumbi kuhlelela imisebenzi yabo bonke ubudala ukuze bonke abagibeli bajabulele ukugibela. Futhi izingane, ezingaba nesikhathi esihle emapaki amanzi anamasilayidi amakhulu, ukuya emihlanganweni yezingane nokuzenzela imisebenzi ekhethekile.
Ngo-2015 kwakukhona abantu abayizigidi eziyi-8,44 abagibela umkhumbi kwelinye lamachweba angama-46 aseSpain (3% ngaphezulu kunango-2014) yize uMnyango Wezemisebenzi Yomphakathi ulindele ukuthi lesi sibalo sizokweqiwa ngo-2016. Ingabe uzoba umndeni wakho nawe wabo? Nazi izizathu eziningana zokuthi kungani kufanele uhambe ngesikebhe uhamba nenkampani yabancane.
1 Okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele
2 Nsuku zonke endaweni entsha
3 Nisale kahle ekuphatheni imithwalo nezingane
4 Uzodla usuthe
5 Inkululeko yabazali nobumnandi bezingane
6 Izingane azikhokhi
Okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele
Izingane mhlawumbe azijwayele ukugibela isikebhe njengoba zisebhasini noma endizeni. Ukuvakashela amazwe ahlukene ngenkathi wenza uhambo ngomkhumbi kuyinto ehlukile lapho bezokwazi khona ukucabanga ngolwandle ngobukhazikhazi balo nobukhulu balo, bazi ukuthi injani impilo esikebheni futhi baphile i-adventure ekhetheke kakhulu abazoyikhumbula impilo yabo yonke.
Nsuku zonke endaweni entsha
Ukuhamba ngomkhumbi we-cruise akuyona into eyindida. Ngeke kwenzeke ukuthi izingane zikwazi ukubhoreka uma ucabangela yonke imisebenzi abangayenza lapho nabathokozi nezinye izingane ezingontanga yabo. Uhambo oluya phakathi kwamachweba ngeke lube yisicefe kubo, ngakho-ke ngeke babuze lokho okujwayelekile ukuthi “sifika nini? Esikhundleni esiphambene nalokho, isikhathi sizodlula.
Ngaphezu kwalokho, ukuhamba ngesikebhe kuzobavumela ukuthi bavakashele amadolobha amaningi emazweni ahlukahlukene futhi bathathe uhambo lokuzijabulisa. Bazothola izindawo ezinhle kakhulu ezizodonsa ukunakwa okuningi, usuku ngalunye lube yinto ehlukile.
Uma kukhulunywa ngokuvakasha ezikalini ezahlukahlukene zesikebhe kunezindlela ezimbili ongakhetha kuzo. Okokuqala ukuzilungiselela sisodwa kanti okwesibili ukuthatha uhambo oluhlelwe ngumkhumbi. Kulokhu kokugcina, kufanele uzibekelele ku-inthanethi noma lapho ufika emkhunjini.
Nisale kahle ekuphatheni imithwalo nezingane
Ukuhamba nezingane kwesinye isikhathi kungaba yinkinga uma uhambo lwezindawo ezahlukahlukene luhlelelwe ngoba kufanele uphathe amapotimende, amathoyizi namatrololi ngaphandle kokulahlekelwa yizinto ezincane.
Kohambo lokuhamba ngesikebhe, konke kwenziwa lula njengoba umthwalo ubhekwe ethekwini futhi nabasebenzi banakekela ukukuhambisa emakamelweni. Bese kuthi endaweni ngayinye lapho umkhumbi ufakwe khona, kwanele ukuletha okubalulekile ukuvakasha.
Ukondliwa kwezingane ngesikhathi sohambo ngokuvamile kuyindaba ekhathazeka ngabazali. Kunzima ukuhlanganisa ukudla okwehlukahlukene futhi okunempilo lapho izindawo zokudlela ezisendaweni yedolobha zingaziwa, izingane zikhathele ukusuka lapha ziye lapho kakhulu noma azinikeli ngezinsiza lapho zikhetha isidlo kwimenyu.
Lapho uhamba ngomkhumbi, lezi zinkinga zingaxazululwa kalula njengoba kukhona ama-buffet lapho ungathola khona cishe zonke izitsha esingazicabanga. Ngaphezu kwalokho, banezindawo zokudlela zase-Asia, e-Italy, zaseMelika noma ze-gourmet eziqedela ukunikezwa ukwanelisa ukuthanda kwawo wonke amalungu omndeni.
Inkululeko yabazali nobumnandi bezingane
Iningi lokuhamba ngesikebhe linendawo yezingane lapho izingane zigadwe khona ngaso sonke isikhathi ngabasebenzi abaqeqeshiwe ukuze bakwazi ukubungazwa endaweni ephephile yokuthula okukhulu kwengqondo nenkululeko yabazali. Ngaphezu kwalokho, lapho beyogibela bazothola amabhande esihlakala sokuphepha futhi abazali bangaqasha amadivayisi wepage noma amafoni e-DECT ngokukhokhiswa okuncane okungeziwe ukuze ukwazi ukuxhumana ngaso sonke isikhathi.
Ngale ndlela izingane zingaba nempilo yazo emphakathini. Yenza abangane abasha endaweni ephephile futhi ujabulele iholide ongasoze walikhohlwa. Ngokwengxenye yayo, Abantu abadala bazokwazi nokujabulela izikhathi ezikhethekile bebodwa, ngokuthula kwengqondo ngokwazi ukuthi izingane zabo zisendaweni ephephile futhi ziba nesikhathi esihle kakhulu.
Kuma-cruise amaningi, zonke izingane ezihlanganyela ikhabhathi nabazali bazo zihamba mahhala. Okusho ukonga ingcosana eholidini. Ngakho-ke wonke umuntu angalujabulela uhambo lwemali encane, ngaphandle kwengcindezi futhi ahlole izindawo ezithakazelisa kakhulu emhlabeni kusuka olwandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ukuhamba nezingane » Izizathu ezi-6 zokuhamba nezingane